युगबोध | Naya Yougbodh National Daily | Page 4014 Free songs
Home / Author Archives: युगबोध (page 4014)
भाषिक मृत्युको चिन्ता
August 10, 2013	0 416 Views
टीकाराम उदासी मानव सभ्यताको यात्रामा दर्ुइवटा घटनाले अभूतपर्ूव महत्व राख्छन् एउटा भाषाको अनि अर्को चाहिँ आगोको । मानवउत्पत्तिको निकै लामो युग व्यतीत भएपछि मात्रै समाजमा भाषा र आगोको आविष्कार भएको हो । भाषाको आविष्कारपछि पनि लिपिको आविष्कार हुन त्यत्तिकै निकै ...
उदाउदा न अस्ताउदा आदिवासीहरु यसपालिको रिपोर्ट
August 10, 2013	0 390 Views
शब्द : जे.एन. सागर कोहुन् आदिवासी जनजाति – निकै चर्चाको विषय बन्यो राजनीतिक वृत्तमा । आदिवासी जनजातिलाई राज्यले गर्ने सकारात्मक विभेदका लागि मात्रै त्यो विवाद सिर्जना भयो । तर स्पष्ट छ । अन्तर्रर्ााट्रय श्रम संगठन आइएलओ महासन्धि १६९ ले कुनै ...
फेरिदै साहित्यकारका बिम्बहरु
August 10, 2013	0 455 Views
वसन्त विवश आचार्य एक दशक अगाडिसम्म पनि साहित्यकारको बिम्ब थियो “लामो दाह्री र कपाल पालेको, काँधमा मैलो झोला भिरेको अनि झोला भन्दा पनि मैला अनि पुराना लुगा लगाएको, खुट्टामा अन्तिम अवस्थामा रहेका चप्पल र महिनौं पैसाको मुख नदेख्ने गोजी” समयले ...
August 10, 2013	0 413 Views
नवीन विभास ‘र्घार्र र्घर्ुर …’ ‘घ्याच्च । भुर भुर …’ मैमाथि नै गाडी चढेजस्तो लाग्यो । झस्केँ । खल्बलिएको न्रि्रा झन् बिथोलियो । ‘घरमा आमासँग बोलिरहेको’… देखिरहेका ‘नाना सपना’ भत्कियो । -गाडीले मीठो सपना यसैगरी भत्काउँछ । कहिले मातेको मान्छेले, ...
August 10, 2013	0 383 Views
पद्मप्रसाद शर्मा विनोद आफूलाई शर्ीष्ा ब्यक्तित्व भएको व्यक्तिको रुपमा सम्झन्छन् । उनले आफ्ना सबै क्रियाकलाप देशभक्तिपर्ूण्ा र जनताका निम्ति भएको ठान्छन् । आफूले रोजेको विचार र सिद्धान्त जनमुक्तिका खातिर हुन् भनेर ब्याख्या गर्छन् । विनोदमात्र होइन उनको पूरै जमात आफ्नो ...
विचार नै शक्ति
August 10, 2013	0 436 Views
बलिराम पोख्रेल यस प्रकृतिमा हरेक जीवात्माको अस्तित्व छ । जब बीऊको बिजारोपण हुन्छ, उचित वातावरणमा अंकुराउँदै छ । सनै-सनै वृद्धि हुँदै यौवन, वृद्ध र मृत्यु हुन्छ । त्यसले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन अर्को जीवकोष राखेर गएको हुन्छ । मानव जीवनमा पनि ...
“आँखा अगाडि साथी गुमाउनु कम पीडादायी दिन थिएनन्” -मेरो अतीत मेरो वर्तमान)
August 10, 2013	0 542 Views
हुन त पदले लेसनायक भए पनि गाउ“घरमा उहा“लाई ड्राइभर बाजे भनेर चिन्छन् उहाँ अर्थात् विष्णुप्रसाद पोख्रेललाई । भारतीय सेनामा जागिर खाँदा उहाँले गाडी चलाउने काम गरेका कारण विष्णुप्रसाद पोख्रेल लेसनायक भन्दा ड्राइभरको कामबाट परिचित हुन थाल्नुभयो । प्युठान खलंगा गाविसस्थित ...
वार्ता सफल पार्न दलहरुबीच द्विपक्षीय छलफल
August 10, 2013	0 498 Views
युगबोध समाचारदाता काठमाडौं, २५ साउन । असन्तुष्ट दलहरुस“ग शुरु भएको वार्ता सफल पार्न दलहरुले द्विपक्षीय छलफल अघि बढाएका छन् । सोही क्रममा शुक्रवार एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेबीच तथा नेपाली कांग्रेस र नेकपा-माओवादीबीच छुट्टाछुट्टै छलफल भएको छ । एमाओवादी ...
अझै ५ सय १२ बालिका कम्लरी
August 10, 2013	0 220 Views
युगबोध समाचारदाता घोराही, २५ साउन । सरकारले कम्लरी मुक्तिको घोषणा गरे पनि दाङलगायत पश्चिम नेपालका पा“च जिल्लामा ५ सय १२ बालिकाहरु कम्लरी बस्न बाध्य भएका छन् । मुक्त कम्लरी विकास मञ्चले शुक्रवार घोराहीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दाङ, बा“के, बर्दिया, कैलाली ...
‘असन्तुष्ट दलहरु गम्भीर बन्नुपर्ने’
August 10, 2013	0 291 Views
युगबोध समाचारदाता घोराही, २५ साउन । एकीकृत नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य नन्दकिशोर पुन पासाङले जारी वार्ता प्रक्रियाबाट निकास खोज्न असन्तुष्ट दलहरु गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ । एमाओवादी क्षेत्र नं. ३ दाङले शुक्रवार सौंडियारमा गरेको गाविसस्तरीय नेता कार्यकर्ता भेटघाट तथा प्रशिक्षण ...
Page 4,014 of 4,033« First...3,9904,0004,010«4,0124,0134,0144,0154,016»4,0204,030...Last »